Cumar finish oo Degmada wadajir u magacaabay Gudoomiye cusub.
Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho, Mudane Cumar Maxamed Maxamed (Filish) ayaa maanta xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyaha maamulka degmada Wadajir, Mudane Cabdiraxmaan Ow Cali.
Wareegto ka soo baxday xafiiska duqa Muqdisho ayaa xilki looga qaaday mas’uulkaasi, iyadoona guddoomiyaha cusub ee degmada Wadajir loo magacaabay, Bashiir Maxamed Ow Cali oo ay walaalo yihiin mas’uulka xilka laga qaaday.
Sababta xilka looga qaaday guddoomiye C/raxmaan Ow Cali ayaa waxaa lagu sheegay inuu wax ka qaban waayey dhibaatooyinka ka jira degmada Wadajir ee G/ Banaadir.
Bashiir oo ah nin dhalinyaro ah ayaa sidoo kale horay uga soo shaqeeyey dowladda hoose ee Xamar
« Guri ku yaala Muqdisho oo shacab ku dumay.
Xasan Shiikh Maxamuud oo ku baaqay in Shirka Dhuusamareeb aysan dhinacyo isku koobin. »